စွဲငြိဖွယ်ရာ - စာမျက်နှာ3- NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Tag Archives: immersive (စာမျက်နှာ 3)
V-Nova နှင့်NGCodec®သင်္ဘောစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့နိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကို real-time UHD encoding က
•ပူးတွဲဖြေရှင်းချက် PERSEUS ™ Plus အား NAB9ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း VP1 နှင့် AV2019 ဗီဒီယိုကအော်ပရေတာမှပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်ကမ်းလှမ်းရန် AWS နှင့် Xilinx နှင့် Advantech •ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပုဂ္ဂလိကမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးဘို့ပုံစံအချက်ကတ်များအမျိုးမျိုးအပါအဝင်ဖြန့်ကျက်ရွေးချယ်စရာ Broad အကွာအဝေး•မကြာမီလာမယ့်အတူ HEVC တိုးမြှင့်ကမ်းလှမ်း , Las Vegas မှာ, 8 - 11 ဧပြီလ 2019 - V-Nova, Ltd. & NGCodec® ...
SmallHD ကနေပထမဦးဆုံး7"Touchscreen ကြိုးမဲ့ု့ကပ်ရေး / Receiver NAB Booth C7 မှာ FOCUS 500 Bolt က 5725 RX ကိုကြည့်ပါ
SmallHD ညာဘက် built-in တစ်ခု Teradek လက်ခံအတူ FOCUS7Bolt က 500 RX ခုနစ်လက်မ HD ကို touchscreen ကကြိုးမဲ့မော်နီတာမိတ်ဆက်။ တစ်ဦး 1000-nit မိုဃ်းလင်းကြည့်ရှု Display, Full HD ကို Resolution, ဦးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်း software ကို tools များနှင့် Ergonomics ပေါ့ပါးလက်ကိုင်, ဒီစွယ်စုံ tool ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို Featuring ကြိုးမဲ့, တတ်နိုင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရဲ့မော်နီတာအဖြစ်တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သော On-ကင်မရာမော်နီတာအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံး။ အာရုံ7ပေါ်တွင်တည်ဆောက် ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားများသို့အကြောင်းအရာကားမောင်းအဆိုပါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမော်တော်ကားဖျော်ဖြေရေးစျေးကွက်အတွက်မော်တော်ယာဉ်ဖျော်ဖြေရေးအဘို့အမြင့်တက်စားသုံးသူဝယ်လိုအား၏ရလဒ်အဖြစ် 40.17 အားဖြင့် $ 2024 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိရန်မျှော်လင့်ရသည်။ တိုးတက်လာသောဆက်သွယ်မှုနဲ့ 5G များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုမာလ်တီမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးန်ဆောင်မှုများ၏ကျယ်ပြန့်ရရှိမှုအပါအဝင်အနာဂတ်အတွက်ကားတစ်စီးန်ဆောင်မှုများအတွက်လမ်းကြသည် - ပိုမိုခေတ်မီဖျော်ဖြေရေးများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးဆောင် ...
အပြတ်အတောက်အပေါ်သူတို့ရဲ့အလုပ်အတွက်တစ်ဦး 2015 အကယ်ဒမီAward®အမည်စာရင်းတင်သွင်းမျှဝေသောသူ CULVER CITY, Calif. -ကြီးကြပ်အသံအယ်ဒီတာများကီလီဗန်နှင့်အင်ဒရူး DeCristofaro, Sony Pictures Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစုံတွဲကို ADR ကြီးကြပ်ရေးမှူးအဖြစ်အသံကအယ်ဒီတာနဲ့ Sullivan ကကြီးကြပ်အဖြစ် DeCristofaro နှင့်အတူယခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ပုံအကယ်ဒမီAward®ဆုရှင်အစိမ်းရောင်စာအုပ်အပါအဝင်နှစ်ပေါင်းများစွာမြောက်မြားစွာဇာတ်ကားတွေကိုပူးပေါင်းပါပွီ။ ...
ပို့ဆောင်ရေး Stream Splicing ဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ငါးကြက်တံခွန် Technologies ကအတူဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်အပေါင်းအဖေါ်များ
Champaign က, မကျန်းမမာ - ။ မတ်လ 14, 2019 - ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်ယနေ့ငါးကြက်တံခွန် Technologies က TS Splicer software ကိုနှင့်ကိုဘော့ SCTE-104 / 35 သွင်းမှုစနစ်ကို အသုံးပြု. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီး splicing ပေး, ငါးကြက်တံခွန် Technologies ကတစ်ဦးကိုဗြိတိန်အခြေစိုက်ထုတ်လွှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီနှင့်အတူလက်တွဲထုတ်ပြန်ကြေညာ ။ အသစ်ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လွှင့်, IPTV, ဂြိုဟ်တုများနှင့်ကေဘယ်လ်တီဗွီကို application များအတွက်တစ်ဦးတတ်နိုင်, အလိုအလျောက်ကြော်ငြာသွင်းသို့မဟုတ်မီဒီယာအစားထိုးစနစ်ကဖန်တီးပေးပါတယ်။ ...
'အက Wall ပေါ် Fly' 'ထုတ်လုပ်မှု' ဤဘဝတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပါတယ် '' TLC ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရိုးရှင်းဖို့ Dejero ထည့်သွင်း
Dejero, နေချိန်တွင်မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများကိုမိုဃ်းတိမ်ကို-managed ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဆန်းသစ် - Dejero EnGo ပြပွဲရဲ့ဒုတိယရာသီ Waterloo, အွန်, မတ်လ 13, 2019 ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသောနေရာများမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်းဖြန့်ကျက်အချိန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ချွေ ဝေးလံခေါင်ဖျားနေရာများတွင်, ငှါ, အမှတ်တရဖျော်ဖြေမှု (FOTW) ရက်နေ့တွင် Fly, အမေရိကားရဲ့ဦးဆောင် unscripted ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ enabled ...
Chykeria Thompson ကလက်မှုပညာ Lectrosonics အတူ High-ကြိမ်နှုန်းအလုပ်ရှာဖွေရေး
အတ္တလန်တာ, ဂျော်ဂျီယာ (မတ်လ 12, 2019) - အသံရောနှော Chykeria Thompson ကသူမ၏စီမံကိန်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီမှအပြုသဘောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်၏သူမ၏အမှတ်တံဆိပ်ဆောင်ခဲ့ကျွမ်းကျင်မှု, နှလုံး, drive ကိုတစ်ဦးအာဏာအိမ်တော်ဖြစ်၏။ ခရက်ဒစ်၏ Thompson ကယ့်စာရင်းထဲမှာဒီကမ္ဘာ့ဖလားကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်နှင့်မျှော်လင့်ခြင်း & Fury မပင်ဖြစ်သည်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, ထိုကဲ့သို့သောအဆိုပါ Walking Dead, သူဟာ Emmy ဆုရရုပ်မြင်သံကြားရှိုးအတ္တလန်တာစားဟင်းလျာများအဖြစ်တီဗီစီးရီးလည်းပါဝင်သည်: ...
JVC သစ္စာရှိမှု-အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson အစီအစဉ်, နယူး ProHD များအတွက်ချိတ်ဆက်ပြီးသည် CAM ဝယ်ယူလျှော့ကမ်းလှမ်း
ဝိန်း, NJ (ဖေဖော်ဝါရီလ 18, 2019) - JVC Professional ကဗီဒီယို, JVCKENWOOD အမေရိကန်နိုင်ငံကော်ပိုရေးရှင်း၏ဌာနခွဲ, ယနေ့ GY တစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုအဘို့ကို select လုပ်ပါ ProHD cam-corders ၏လက်ရှိပိုင်ရှင်များမှတစ်ဦး $ 1,000 လျှော့စျေးကိုထောက်ပံ့ပေးရာသည်၎င်း၏သစ္စာရှိမှု-အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson အစီအစဉ်၏ပြန်လာထုတ်ပြန်ကြေညာ -HC900 ချိတ်ဆက်သည် CAM သို့မဟုတ်မတ်လ 890, 31 ကဝယ်ယူ GY-HM2019 ProHD တီဗွီကင်မရာ။ အဆိုပါသစ္စာရှိမှု-အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson အစီအစဉ်ကိုကုန်သွယ်ရေး-In အစီအစဉ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခုနှစ်တွင် ...
အခုတော့ရရှိနိုင် Aja HA5-12G Mini ကို-converter
Fiber Mode ကို Aja ဗီဒီယိုစနစ်များနှင့်အတူ 2.0G-SDI မှ high-အရည်အသွေး HDMI 12 ယခုတင်ပို့, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သစ်ကို HA12-5G Mini ကို-converter နှင့်အတူ proAV Workflows ၎င်း၏ 12G-SDI ထုတ်ကုန်တိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Aja ရဲ့ထုတ်လုပ်မှု-သက်သေပြ HA5-4K Mini ကို-Converter ရဲ့နောက်မျိုးဆက်, HA5-12G နှစ်ခု 2.0G-SDI တစ်ခုတည်း link ကိုလက်ငင်းအနေနဲ့ HDMI 12 input ကို၏အစွမ်းထက်ကူးပြောင်းပေးသည်။ 4K / UltraHD ပို့ဆောင်သည့်အခါ cable ကိုပြေးလျှော့ချဘို့ ...
Sixteen19 ထိပ်တန်းအဆင့် Talent ထည့်ပေးသည်
ဘော့ Lowery တီဗီပဲ့ယူ; ဦးခေါင်းအရောင်း NEW YORK- Sixteen19, နယူးယောက်အခြေစိုက် Boutique ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီမှ Allison Vargas, ကို Global Feature ကိုရုပ်ရှင်နှင့် Episode အရောင်းညှိနှိုင်းရေးမှူးအဖြစ်တီဗီထုတ်လုပ်မှုနှင့် Allison Vargas ၏ဦးခေါင်းများကဲ့သို့ယနေ့ဘော့ Lowery နှစ်ခု key ကိုငှါး လုပ်. ရသမျှကြေညာခဲ့သည်။ Lowery နှင့် Vargas Sixteen19 Co-တည်ထောင်သူ Pete Conlin ကဦးဆောင်ကာကြီးထွားလာအဖွဲ့ကပူးပေါင်း ...
ဝိပဿနာတီဗီမိတ်ဆက်နယူးမော်တော်ကား Show ကိုဂလိုဘယ်လူမှု Celebrity စူပါ Blondie ဖွငျ့ Hosted
ဝိပဿနာတီဗီ, ကမ္ဘာ့ဦးဆောင် 4K UHD HDR ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဇာတိ UHD အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူအဲလက်စ် Hirschi သရုပ်ဆောင်ယင်း၏ Supercharger အသစ်ကပြသ, ခေါ်စူပါ Blondie ၏ကော်မရှင်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ မောင်းနှင်မှုအတွက်အထူးပြုတဲ့သူသြဇာလွှမ်းမိုးမှု trotting တစ်ကမ္ဘာလုံး, သုံးသပ်နှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အရှားပါးဆုံးနှင့်အများဆုံးထူးခြားတဲ့ကားအကြောင်းကြည့်ရှုစိတ်လှုပ်ရှားလာပြီ, စူပါ Blondie အပေါ်ကျော် 500K subscriber များအားရှိပါတယ် ...
3 ၏စာမျက်နှာ 22«12345	»	1020...နောက်ဆုံး»